warkii.com » John Cena oo markale wareeriyay taageerayaasha Bollywood-ka kaddib markii uu soo dhigay sawirka Aishwarya… (Maxay dhaheen taageerayaashiisa?)
John Cena oo markale wareeriyay taageerayaasha Bollywood-ka kaddib markii uu soo dhigay sawirka Aishwarya… (Maxay dhaheen taageerayaashiisa?)
Halyeyga ciyaarta musaaricada ama lagdanka ee John Cena ayaa muddooyinkii u dambeeyay dhex gal badan ku yeeshay Bollywood-ka isagoo marwalba bartiisa Instagram oo uu ku leeyahay taageerayaal badan soo dhiga sawirro jilaayaal Hindi ah isagoo aanan wax qoraal ah soo raacin.
John oo sidoo kale ah jilaa ka tirsan Hollywood-ka ayaa sabtidii soo dhigay sawirka atariishada Axaddii hore laga helay xanuunka COVID-19 ee Aishwarya Rai Bachchan, isagoo aanan wax qoraal ah usoo yeellin sidii caadada ahaydba.
Sawirrada uu John Cena soo dhigo bartiisa Instagram-ka ayaa marwalba sameeya cinwaanno kala duwan, halka taageerayaasha ku xiran bartiisana ay bixiyaan aaraahyo ay ku muujinayaan inay ku jahwareersan yihiin ujeeddada uu sawirka u soo dhigay.
“Saaxiib qoraal soo raaci si aan u ogaanno wax aad soo dhigeysid micnaha aad kala jeeddid” ayuu soo qoray mid ka mid ah dadka ku xiran boggiisa, halka mid kale uu soo qoray: “Walaal jooji fadlan”.
Taageere kale oo ku faraxsan sida xiddigan uu ugu milan yahay Bollywood ayaa soo qoray: “John Cena waa uu nagaga ogaal badan yahay Bollywood in ka badan annaga”.
John Cena ayaa dhowr jeer oo kala duwan bartiisa Instagram soo dhigay sawirrada jilaayaal caan ka ah filimida Hindiga isagoo ku muujinaya la qeybsiga xaaladaha ay markaas ku sugan yihiin.
Waxa uu hore usoo dhigay sawirrada atoorayaashii geeriyooday ee Irrfan Khan, Rishi Kapoor iyo Sushant Singh Rajput, halka toddobaadkii hore uu soo dhigay sawir ay ku wada jireen Amitabh Bachchan iyo wiilkiisa Abhishek oo labaduba laga helay xanuunka COVID-19.
Haddana waxa uu soor raaciyay sawirka Aishwarya oo u dhexda Abhishek Bachchan oo uu ku dhacay coronavirus iyada iyo gabadheeda siddeed jirka ah ee Aaradhya Bachchan.